Popularity cryptocurrencies, kwasvika chikero dzakadaro, kuti chete chaizvo simbe kana dzakangwarira chaizvo yokunzvenga ichi denderedzwa bato. Zvakaratidza kuti ushingi uye kutsungirira unoratidzwa kwete bedzi vatengesi uye vanoita makumi ezviuru zvemakore kutengesa ruzivo pamusoro exchanges, asiwo zvavo kuyaruka.
vana Modern vakaberekerwa munyika digitaalinen zera, ivo wakapoteredzwa ose midziyo kubva pauduku, uye vanotanga kutaura makombiyuta pamberi nezvizvarwa. Kubvira vachiri vaduku, vane zvakadai pakukurukurirana mikana zvaisabvumirwa akarota yakataurwa nezvizvarwa. saka, vamiririri rudzi Z vari nokukurumidza akarovedzwa uye kunzwa zvakawanda Organic munyika michina yemazuva.
Erik Finman, rimwe inobudirira vechiduku vakawanda vari mumunda cryptocurrency, mu 12 Makore vainzwa tarisiro bitcoin. For 6 makore, Akauya ake digitaalinen chinzvimbo kuti 400 shamisa BitCoins, riri kupfuura 4 mamiriyoni dhora yakaenzana panguva pamwero ano. Zvino vose vakatanga 2011 ne $ 1000 yachengetwa kunodya zvinenge uye rokuberekwa nezvipo. ipapo Bitcoin Takauyira $ 12.
By 2013, bitcoin akura zvokuti vakatengesa yesangano raJehovha Eric akanga zvokukwanisa nokuparura basa kutsvaga vadzidzisi Botangle, uyewo pashure kutengeswa BitCoins. Mukomana crypto-Zvokutopenga hakuzofadzi kumira ikoko, yake mafungiro, bitcoin anoramba inivhesitimendi chikumbiro, uye kukosha kwayo vanogona kusvika miriyoni emadhora. Mukomana shoroma zvakare anotenda kuti ano dzidzo kwava zvekare, uye YouTube uye Wikipedia anogona kudzidzisa zvakawanda. Iye kunyange nharo nevabereki vake kwete kuti aizoenda kuyunivhesiti kana aigona chokurarama miriyoni emadhora asati asvika akura. Kwete chidzidzo wakaipa Chizvarwa ano?
Ehe saizvozvo, Eric Finman harisi chete muenzaniso kuyaruka kuda cryptocurrencies. chikuru “murwisi” ndizvo Eddy Zillan, uyo akatanga kufarira crypto-basa vanhu pazera 15. Zviri muduku kuti kutanga Coinbase nhoroondo, asi Eddy haana kurega izvozvo uye akawana nzira kumativi nzvimbo mitemo. Chinhu chokutanga chaakaita chakanga kutenga Ethereum kuti $ 100. Zvinokosha kucherechedza kuti ipapo havana mazana bloggers uye magazini, hapana aigona kudzidzisa sei kuita zvakanaka. Pasinei neizvi, Mukomana akawana yokutanga $ 10 nokuti vaviri maawa. Izvi kugona kukundikana kumurova, nekuti 10% mumaawa mashoma – rakaisvonaka kukura. Gare gare iye akagadza pamusoro $ 12 zviuru ari crypt. Nokuti gore ivo rakakura $ 350 churu. Now Zillan ndiyo 18 zera, iye ane Portfolio munokosha kupfuura $ 1 miriyoni uye mabasa ari Consulting yake yakasimba Cryptocurrency Financial.
Another “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-gore, mboni of 6 fomu vakakwanisa kunyora pamusoro Bitcoin rose bhuku, umo akaratidza chiratidzo chake musimboti cryptocurrency uye blockchain. Bhuku, zvichida muduku nyanzvi kryptovlyutam anogona kunyange kutengwa musi Amazon. The kubatsira, ehe saizvozvo, rinotarisirwa zvikurukuru vana, izvo, zvisinei, hakuiti zvitadzise ayo kuenderana. Andrew pachake ane, maererano naye, aizvininipisa 0.02 BitCoins.
Kune vechiduku crypto-iyi uye “zvakaipa vakomana”. saka, ari Bitcoin Platinum, zhinji anotsausa, kwakatangwa nokuondomoka yokupara fraudster. zvisinei, veruzhinji akateerera nenguva, uye aifanira kubvuma kuti pakudyidzana nechirongwa. Maererano naye, akaronga kuunganidza chete $ 5,000.
pachena, munguva yemberi kudiwa vanachiremba mumunda digitaalinen zvoupfumi zvichaita chete kukura. Uye pfungwa, nenhoroondo zvose, hakuzofadzi lag shure kana.
Coinbase inozivisa S ...
Greek dare kuti yokuwedzera ...
Previous Post:Blockchain News 11.05.2018
Next Post:Blockchain News 14.05.2018